प्रचण्डले आ’रोपपत्रमा किन उठाएनन् मेलम्चीको भ्र’ष्टचार विषय ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रचण्डले आ’रोपपत्रमा किन उठाएनन् मेलम्चीको भ्र’ष्टचार विषय ?
प्रचण्डले आ’रोपपत्रमा किन उठाएनन् मेलम्चीको भ्र’ष्टचार विषय ?
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले सरकारवि’रुद्ध लगाएको आ’रोपपत्रको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ । उनले लगाएका फ’र्जीपत्रको पक्ष वि’पक्षमा आ’रोप प्र’त्यारोप चलिरहेको छ । तर, प्रचण्डले लगाएको आ’रोपपत्रमा बहुचर्चित र निक्कै भ्रष्टचार भएको भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन ।मेलम्चीको विषयलाई लिएर खानेपानी मन्त्री बिना मगरवि’रुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ’जुरी पनि परेको छ ।रञ्जु दर्शनाले भ्रष्टचार भएको भन्दै आयोगमा उ’जुरी दिएकी हुन् ।
मेलम्चीको एक ठेक्का प्रचण्डका घरबेटीले पाएका छन् । काम कहिल्यै नगर्ने उपमा पाएका ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई आयोजनाको डेढ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का पाएका हुन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तार तथा ओभरहेड ट्याङकी निर्माणको एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख २२ हजार ७६० रुपैयाँमा ठेक्का पाएका छन् ।गृह मन्त्रालयका अनुसार शैलुङ निर्माण क्षेत्रमा बदमासी गर्ने क बर्गको ठेकदार हो । यस्तो सूचिमा रहेको कम्पनीलाई बुहारी मगरले ससुराको घरबेटीलाई कसरी ठेक्का दिइन् जाँचको विषय रहेको छ । तर, विचरा प्रचण्ड यसविषयमा कुरै गर्न चाहादैनन् ।जनता टाइम्स